Qado sharaf Muqdisho loogu sameeyey ciyaartoyda kooxaha heerka 2aad ee Dahabshiil iyo Banaadir (DAAWO SAWIRADA) – idalenews.com
Qado sharaf Muqdisho loogu sameeyey ciyaartoyda kooxaha heerka 2aad ee Dahabshiil iyo Banaadir (DAAWO SAWIRADA)
Waxaa maanta lagu qabtay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir munaasabad Qado sharaf aheyd oo loo sameynayey maamulka, macalimiinta iyo ciyaartoyda kooxaha kubada Cagta FC Dahabshiil iyo FC Banaadir oo ka mid ah kooxaha heerka 2aad ee Somalia (Serie-B).
Qado sharaftan oo uu soo agaasimay maamulaha guud ee labadaas kooxood Cumar Maxamed Nuur (Mukambe) ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiin Isboorti oo ay ka mid ahaayeen, gudoomiyaha Olombikada degmada Waaberi Cali Rooble Nuur, macalinka xulka kubada Cagta Qaranka Soomaaliyeed Macalin Cabdi Faarax Geelle, xoghayaha naadiga FC Dahabshiil Cali Yuusuf Ibraahim iyo macalinka kooxdaas Saalax Faarax Muxyadiin, gudoomiyaha naadiga FC Banaadir C/llaahi Cilmi iyo macalinkooda Macalin Qadar iyo masuuliyiin kale.
Qadada ka dib waxaa munaasabadaas ka hadlay masuuliyiin kala duwan oo uu ka mid ahaa maamulaha guud ee labadaas kooxood Cumar Maxamed Nuur (Mukambe) oo maamulka ciyaartoyda iyo macalimiinta kooxahaas ku amaanay dedaalka ay ugu jiraan sidii ay kaalimo fiican uga geli lahaayeen horyaalka kooxaha heerka 2aad ee dalka oo si habsami leh uga socda Muqdisho.
“Waan sii wadeynaa dhiirigelinta aan idinla garab taaganahay idinkana waxaan idin rajeynaynaa inaad guulo la taaban karo ka soo hoysaan tartamada aad ka qeyb galaysaan waana ku faraxsanahay dedaalkiina mustaqbalkana waxaan idin rajeynayaa inaad ku biirtaan kooxaha heerka 1aad” ayuu intaa ku daray maamulaha guud ee labadaas kooxood Cumar Maxamed Nuur (Mukambe).
Labada kooxood FC Dahabshiil iyo FC Banaadir oo ka mid ah kooxaha heerka 2aad ee Somalia (Serie-B) ayaa waxaa aasaasay marxuum Saciid Maxamuud Nuur (Mukambe) oo ahaa gudoomiyihii xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta kaasoo sanadkii hore ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntii ciyaar ka tirsaneyd horyaalka kubada Cagta heerka labaad ee Somalia ayaa waxay galabta ku dhexmartay garoonka Jaamacadaha ee degmada Hodan ciyaartoyda labada kooxood ee FC Dahabshiil iyo FC Banaadir, waxaa ciyaartaasi ay aheyd mid aad u xiise badan oo ay soo daawasho tageen boqolaal dadweyne iyo masuuliyiin Isboorti, iyadoo ku soo dhamaatay barbar dhac goolal la’aan ah 0-0.
Abwaan Dhoodaan oo dhintey (Daawo filim ka hadlaya taarikhdiisa)